Muuri News Network » XOG: MD Farmaajo oo Kulan Albaabada u xiran yihiin la qaatay Xildhibaanada Mooshinka ka wada Jawaari…
XOG: MD Farmaajo oo Kulan Albaabada u xiran yihiin la qaatay Xildhibaanada Mooshinka ka wada Jawaari…
Mar 18, 2018 - Comments off
Warar hoose ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu saacado ka hor Kulan Albaabada u xiran yihiin la yeeshay Xildhibaanada Mooshinka ka wada Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Madaxweyne Farmaajo oo kulankan dalbaday ayaa dhageystay Warbixinta Xildhibaanada Mooshinka ka wada Jawaari waxayna si cad ugu sheegeen inay ka go’an tahay inuu xafiiskiisa baneeyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Xildhibaanada u sheegay in cidii ay ka arkeen inay sharciga hareer marto haday isku raacaan ay xilka ka qaadi karaan laakiin wuxuu sheegay in qalqalka dalka uu hada jiro aysan suura gal aheyn inuu sii socdo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa soo jeediyay Labo arin oo kala ah in Xildhibaanada ay ka laabtaan Mooshinkaan ka dhan ah Jawaari maadaama dalka uu ku talaabsaday hormar badan dowladiisana uu doonayo inay wadajir ku dhameystaan Madaxda dalka.
Sidoo kale Madaxweyne ayaa ku baaqay in lasoo dhameystiro Xildhibaanada mooshinka ka maqan ka dibna codka loo qaado si dalka uu kaga baxo xasilooni darada siyaasadeed uu ku dhex jiro.
Xildhibaanada ayaa Madaxweynaha u balanqaaday inay si deg deg ah kaga jawaabi doonaan baaqyadiisa.